Umbono wentengiso: Cofa indawo yoBhaliso loMsitho | IMarTech Blog
Umbono wentengiso: Cofa indawo yoBhaliso loMsitho
NgoLwesithathu, Matshi 16, 2011 NgoMgqibelo, Oktobha 29, 2011 URobby Slaughter
Ngapha kwe Ukubonisana ngemveliso Inkampani endiyisebenzisayo, senza itoni yeesemina zikawonkewonke. Senza umgangatho wentengiso yokuthengisa umcimbi: sinayo imicrosite, sineleta yeendaba ye-imeyile, sinayo inkqubo yobhaliso kwi-Intanethi. Kodwa sinoluvo olunye ngakumbi esicinga ngalo ukuzama, kwaye kukuphambana okuncinci. Mhlawumbi ungasinceda ukuba usixelele ukuba olu luvo olulungileyo okanye olubi: sikubiza ngokuba "kukucofa kube kanye"
Nantsi ingcinga. Ubhalisela ileta yeendaba ye-imeyile, equlathe ulwazi malunga nomsitho ozayo. Xa ucofa iqhosha, thina kwangoko qaphela ukuba ubhalisile yomsitho. Akunyanzelekanga ukuba ugcwalise ifom. Siza kusebenzisa ikhonkco elikhethekileyo kwincwadana ye-imeyile ukumisela ukuba ungubani kwaye ulandele loo nqakrazo. Jonga i-mockup engezantsi:
Kubonakala kukuhle ngokuthe ngqo, kodwa kukho iingxaki ezithile ebesicinga ngazo. Umzekelo:
Kuthetha ntoni "ukubhaliswa kwangoko"?
Ukuthengisa umsitho kuxhomekeke ngokwenene ebantwini ekuzibonakaliseni. Ukucofa iqhosha kunokukusa kwiphepha lewebhu apho unokongeza khona kwezinye iinkcukacha zakho. Okanye kunokukusa kuqala kwiphepha elingena ngaphakathi elisixelela ukuba ukulungele ukubhalisa, ke sinokulandela ukuba awuyigqibi yonke inkqubo yobhaliso.
Kuthekani ngezaphulelo ezikhethekileyo?
Sele sinikezela ngamaxabiso kuphela kubabhalisi beendaba. Iqhosha elithi "Ndisayinele" linokungena kwisaphulelo kwiphepha lokubhalisa. Kulungile, kodwa ngaba sifuna ukwenza ukuba izivumelwano ezikhethekileyo zicace ngakumbi kwaye zibe nenjongo?
Kwenzeka ntoni ukuba i-imeyile ithunyelwe komnye umntu?
Le yindawo enkulu yokuncamathela. Ukuba uthumela i-imeyile kumhlobo, kwaye bona cofa indawo ethi "Ndisayinele", baya kuthi bakubhalisele umcimbi. Ewe singababuza ukuba baqinisekise ukuba igama labo ngu "Bob Smith", kodwa ngaba oko kwenza ukuba kube nzima kakhulu kwimeko yesiqhelo?
Ngaba kufuneka sinikeze zombini "Ndinomdla" kunye nekhonkco "Ndisayinele ngoku"?
Incwadi yeendaba yangoku ye-imeyile inekhonkco "Iinkcukacha ezongezelelweyo", onokucofa kuzo ukubona amaxabiso kunye neenkcazo zomnyhadala. Akukho bungozi ekucofeni kwikhonkco. Kodwa iqhosha elithi "Ndityikitye" lithetha ukuba uyazibophelela. Ngaba ngumbono olungileyo okanye ombi lowo?
Ucinga ntoni? Singayithanda ingxelo yakho malunga nale mbono intsha yokuthengisa: ngaba kufanelekile ukuba siyenze?
(Kwaye ukuba uyayithanda, zive ukhululekile ukuba uzame ngokwakho kwaye usazise ukuba ihamba njani!)
Ukuthengisa nge-imeyile iNcwadi yokuSebenza ePhambili
Cudisa kwezinye iindwendwe ezintsha ngeTynt
Mar 16, 2011 ngo 4:32 PM
Ndicinga ukuba ukucofa iqhosha kufuneka ligcwalise ngokuzenzekelayo ulwazi lwazo kwiqonga lakho lokubhalisa lomnyhadala. Ngale ndlela wenza ukuba inkqubo ivelise ngakumbi kwaye indawo yokungena ibe lula. Ungafumana isibonelelo esongeziweyo somntu odlulisayo okwaziyo ukutshintsha igama labo ukusuka phambili
Mar 16, 2011 ngo 5:58 PM
Yiyo kanye le nto siyicebisayo, ke kuyavakala ngathi sikwiphepha elinye. Enkosi!
Mar 16, 2011 ngo 5:11 PM
Hayi kumaqhosha amabini. Iqhosha elithi “Ndityikitye” lithetha ukuba ndiza kubhaliswa xa ndinokucofa kuyo (nangona, ngenene, bendinokulindela ukugcwalisa ifom kuqala) kwaye iqhosha elithi “Ndinomdla” lithetha ukuba ndifuna Nxibelelana nam ngakumbi malunga nayo, kwaye akukho namnye endicinga ukuba yeyona ndlela ilungileyo yokuhamba. Iqhosha elithi “Ndinomdla” libonakala lingenaxabiso ecaleni kweqhosha elithi “Ndisayinele”.
Ndiyithanda kakhulu umbono wokucofa kwiqhosha kwi-imeyile endisa kwiphepha elinolwazi lwam esele lunabantu, kubandakanya nexabiso lesaphulelo. Ewe ndingasenza isaphulelo sibonakale kwiphepha lobhaliso- ndiyathanda ukwazi ukuba ndifumana isivumelwano. Ke into ekufuneka ndiyenzile kukudibanisa ulwazi lokuhlawula ukuze ubhalise, kulula ukuba ne-peasy. Isikhumbuzo sokulandela ukuya kumsitho besingayi kuba sisithokothoko, kodwa ukuba ndibhatele imali yokuya emva koko ngekhe ndilibale.
Ukuba ndigqithisela phambili ileta yeendaba kwaye umamkeli ucofa iqhosha, kuya kufuneka bazalise ulwazi lwabo-hayi into enkulu. Baza kufuneka bangenise ulwazi lwabo lokuhlawula ngoko andinakukhathazeka ukuba baya kubhalisela into engavumiyo. Umbuzo wam kuwe, ke, ngaba ufuna ukuba babe nesaphulelo esifanayo nesamkelwa yincwadana? Kungenxa yokuba le nkqubo iza kusebenza (ngaphandle kokuba unenkqubo eyongezelelweyo yokudibanisa isaphulelo negama hayi ikhonkco).
Re: ukufumana iinkcukacha ezongezelelweyo ngaphandle kokubhalisa, ndicebisa ukudibanisa igama lomsitho kwiphepha lalo lewebhu. Ndicinga ukuba inomdla ngokwaneleyo ukuba abantu bacofe kwigama ukuze bafumane ngakumbi.
Mar 16, 2011 ngo 5:57 PM
Owu, ndiyayithanda! Yenza isihloko somsitho sibe likhonkco, kwaye ungeze iqhosha lokubhalisa kwangoko.
(Sele sizenzile zonke izikhumbuzo zokulandela, kodwa endaweni yokuba sizenze ngokuzenzekelayo sibhala ii-imeyile ngesandla kwaye senze umnxeba ngembeko. Oku kuyonyusa obonisa.)
Ndicinga ukuba kulungile kwabo bangabhalisanga ukuba basebenzise isaphulelo seendaba. Kwimeko apho, siya kuphakamisa ukuba mhlawumbi kuya kufuneka uqhubeke kwaye ubhalisele iincwadana zethu. 🙂
Mar 16, 2011 ngo 7:31 PM
Ndiyawuthanda umbono. Njengoko abanye bekhankanyile, ndiza kuqinisekisa ukuba kukho iindlela zokubhalisela omnye umntu, utsho ukuba umntu olawulayo ufuna ukubhalisela umphathi wakhe kumsitho. Oku kuyafana nendlela i-Amazon.com eyenza ngayo inkqubo yokuthenga ngonqakrazo olunye. Mhlawumbi thabatha imikhondo kubo kwaye ubeke iqhosha 'lokucofa ubhaliso' endaweni yoko?
Mar 16, 2011 ngo 8:35 PM
Ndenza intengiso yomnyhadala kwaye ndiyayithanda umbono wokungena kwangoko. Kwiphepha elingasemva ndiza kubhalisa umntu kwi-camapaign eqala nge-imeyile yokuqinisekisa. Ngale ndlela ukuba umhlobo wam ubhalisile esebenzisa imeyile yam, ndingayidlulisa nayo.
Mar 19, 2011 ngo 8:15 PM
Umbono omangalisayo, uLorraine!
Ke ayisiyiyo le yokubhalisa isiganeko esinye, kodwa ikwayenye indlela yokuhambisa amaphulo.
Enkosi ngengxelo yakho!
Nov 23, 2011 kwi-12: 29 AM
Hlala u-Sourced, umthengisi wentengiso wentengiso, usungule uluhlu lweemveliso ze-eco-friendly ezibonisa ezinye izinto ezothusayo nezimangalisayo zokuphinda zisetyenziswe. Ukuba inkampani yakho ifuna izimvo zokuthengisa ezinomdla kunye nokuziphatha, zininzi izinto onokuzenza: iigundane zemigundane kunye neecasters ezivela kumavili aphindaphindiweyo, iipeni zoqalo, i-yo-yos kunye neepensile ezinokuthi zilandele ookhokho babo kwi-CD endala ethobekileyo. Mhlawumbi eyona gadget inomdla kwingqokelela yabo ye-eco-friendly yiwotshi engenabhetri, engena manzi ebangela ingxoxo enomdla phakathi kweqela apha. Kwiqela elikrelekrele, bekukho iinkcazo ezixhalabileyo zokuba le nto inokusebenza njani kwaye akukho nto sinokuyifuna kwindawo kawonkewonke. Ukuba kukho naziphi na izazinzulu, i-alchemists okanye i-voodoo-ists phaya abanokukhanyisa ngoku, nceda uphawule kwaye usikhuphe kububi bethu.
Ngomhla wama-27 ku-Disemba 2012 ngo-7: 10 PM
Yithande le ngcamango. Ndinqwenela ukuba ikwayimveliso ezimeleyo ngaphandle kokubhalisa kwe-imeyile. Ndiqhuba umcimbi. Sele ndinazo iinkcukacha zonxibelelwano zabantu endibamemayo. Ndifuna nje ukuba bacofe ikhonkco kwi-imeyile ebhalwe "ewe" ukuba bayeza kwaye "hayi" ukuba abekho. Izandi zilula kodwa andikasifumani isixhobo esinika le nkonzo. Ukuba uyazi enye, ndicela undazise njengoko ngoku ndisilwa neeSpredishithi eziSmart ukufumana indawo yokusebenza.
Ngomhla wama-27 ku-Disemba 2012 ngo-7: 15 PM
@LisaDSpark: disqus Ukhe wajonga kwimveliso efana ne- meetup.com kwaphela? Andiqinisekanga malunga ne-imeyile, kodwa isiza ngokuqinisekileyo silula ngoluhlobo… ngezinye izinto ezongeziweyo ukukuvumela ulawule uluntu lwakho.
Ngomhla wama-27 ku-Disemba 2012 ngo-7: 18 PM
Ukudibana kuyamangalisa, hayi le ndiyenzayo ngoku. Siza kuqhubeka nge-Smart Sheet kunye nethemba lokugqwesa. Awunakho ukuqhubeka ucinga ngaphezulu koku. Iintlanzi ezinkulu ukuba zitshiswe, kodwa ndingathanda ukuba nofikelelo kule nkonzo- kwaye ewe ndikulungele ukuyihlawulela! Enkosi, uDouglas. -L
Epreli 11, 2015 ngo-7: 00 AM
Iposti enkulu… Enkosi ngokubhala le posi…